Sharciyadii wadooyinka oo dib loo soo celinayo 22-sano kadib (Sawirro+Warbixin) | Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey	Maanta oo ah
Sharciyadii wadooyinka oo dib loo soo celinayo 22-sano kadib (Sawirro+Warbixin)
Mugdisho(Allssc)-Tan iyo bur burkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa lumay nidaamyadii iyo sharciyada wadooyinka, oo ka mid ah adeegyada aas aasiga u ah bulshada, marka ay timaado isticmaalka wadada iyo habka loo marayo ee dhinaca sharciga ah.
Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, waa xudunta dalka, waxaana mudooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay gaadiidka kala duwan, haba ugu badnaate nuuca raaxada, iyadoo wadooyinka lagu arkayo rag iyo haween kaxeynaya gaadiidka.
Is bedelada ka jira magaalada ayaa waxaa ka mid ah baabuurta noocyada kala duwan ee magaalada lagu wato, ciriiriga wadooyinka, aqoon yarida darawalada iyo jidka oo bur bursan iyo shilalka gaari oo soo badanaya.
Ciidamada taraafikada ayaa maalin walba qabta kiisas la xiriira shil iyo baabuurta sida sharcida darada lagu kaxeeyo magaalada, iyagoo aan wax aqoonsi ah wadan.
Jowhar.com ayaa u suura gashay inay maanta booqato Xarunta Taraafikada, halkaas oo ay ku jireen gaadiid shilal galay, kuwo lagu soo qabtay leesan la’aan iyo qaladaad ay galeen.
Xarunta Taraafikada waxaa ka socotay howlo badan oo la xiriiray arrimaha nabadgelyada wadooyinka iyo adkeynta sharciyada, iyadoo ay jireen dad loo tababarayo oo isugu jiray rag iyo haween.
Taliyaha Ciidamada Nabadgelyada wadooyinka Jen. Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) oo aan kula kulanay Xarunta Taraafiko ayaa sheegay in wadaan qorshayaal ay dib ugu soo celinayaan sharciyadii wadooyinka, isagoo xusay in Ciidamada taraafikada ay ka howl galaan ilaa 33-rugood oo ka tirsan wadooyinka Muqdisho.
“Howsha nabadgelyada wadooyinka si wanaagsan ayay u socotaa, ciidamada Taraafikada waxay habeen iyo maalin ka howl galaan wadooyinka, si ay sharciga u ilaaliyaan gawaaridana u kala hagaan, wado bur bursan waa garan kartaa sida ay u adag tahay in gaadiidka uu isticmaalo, isla markaana sharciga lagu ilaaliyo”ayuu yiri Jen. Cali Gaab oo beeniyay in si aan sharciga waafaqsaneyn ay kula dhaqmaan gawaarida marka ay qaladaad galaan.
Jen. Cali Gaab ayaa sheegay in sanadkii hore uu Muqdisho gudihiisa ka dhacay 274-shil, waxaana uu tilmaamay in 31-qof ay ku dhinteen, halka 54-dhaawacyadooda ay culus yihiin, waxaa uu xusay halka shilalka ugu badan ka dhaceen ay tahay Jidka Maka Al-Mukarama.
“Waxaa sanadkii hore Muqdisho gudaheeda ka dhacay 274-shil, waxaa ku dhimatay 31-qof, waxaa ku dhaawacantay 54-qof oo dhaawacyadooda liitaan, intaas badankood jidka maka almukarama ayuu ka dhacay, waxaa sabab u ah aqoon darada darawalada iyo jidadka oo bur bursan”ayuu yiri Jen, Cali Xirsi Barre.
Waxaa uu sheegay in xarunta Taraafikada la keeno gawaari badan oo qaladaad galay, halka kuwa kalena leesan iyo taargo aan u wadan gawaaridooda, kuwaasoo uu xusay inay qal qal ku yihiin amaanka wadooyinka.
Jen. Cali Gaab ayaa sidoo kale xusay inay jiraan Dugsiyo ay ku tababaraan dadka baranaya darawalnimada, isla markaana ay barayaan dhamaan sharciyada wadooyinka, waxaana uu tilmaamay inay xarunta ka bixiyaan leesano, taargada baabuurta iyo buuga baabuurta oo lagu bixiyo qidmo lacageed.
Mar uu ka hadlay sida ay u howl galaan Ciidamada taraafikada ayuu sheegay inay isugu jiraan rag iyo haween, waxaana uu tibaaxay in haatan tababar u socdaan ilaa tobaneeyo haween oo la barayo sharciyada wadooyinka, habka baarista shilalka marka ay dhacaan.
Waxaa uu sheegay inay qaati ka taagan yihiin gawaarida xamuulka ee sida xad dhaafka loo soo rarayo, kuwaasoo shilal ku gala wadooyinka, isla markaana ku qalibma, waxaana uu inoo soo bandhigay sawiro muujinaya shilalka wadooyinka ka dhacay iyo gawaarida xamuulka ee shilalka galay.
Dhinaca kale intii aan ku sugnaa Xarunta taraafiko waxaa ku argay qeybta xabsiga Taraafikada dhalinyaro loo soo qabtay qaladaad, isla markaana sharci daro ku kaxeynayay gaadiidka, waxaana ka socday xarunta dacwo qaadis la xiriirta shilalka gaariga, iyadoo kadib cadeymo loo gudbiyo Maxkamada si lagu kala saaro dadka ay ka dhaxeyso dacwadaha shilka.
Short URL: http://allssc.com/?p=51205
Posted by Allssc1 on Jan 20 2013. Filed under Wararka.
You can leave a response or trackback to this entry	1 Comment for “Sharciyadii wadooyinka oo dib loo soo celinayo 22-sano kadib (Sawirro+Warbixin)”
fadumo	January 20, 2013 - 10:26 am	waa sax ilaahayna ha ka dhigo meel aamin aamiin